TALO WAYGA YAACDAY: Arturo Vidal oo ku yabaalsan inuu Juve ku laabto, inuu Chelsea ku biiro & inuu Bayern la joogo! – Gool FM
TALO WAYGA YAACDAY: Arturo Vidal oo ku yabaalsan inuu Juve ku laabto, inuu Chelsea ku biiro & inuu Bayern la joogo!
Raage April 8, 2016
(Munich) 08 Abriil 2016 – Waxaa jira xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Antonio Conte iyo ardaygiisii hore ee Arturo Vidal, waxaana jira warar sheegaya inay markale ku midoobi karaan kooxda Chelsea oo maamuli doona kooxda Stamford Bridge.
Dhanka kale, xiriirka laacibkan reer Chile iyo kooxda Bavarian-ka ah ee Bayern ayaan marba hawada gelin, waxaana dhici karta suurtagalnimo ah inuu xagaaga ka tago, balse Vidal ayaa woxoogaa arrintan qaboojiyey.
“Halkan baan ku faraxsanahay, waa inaan ka fikiraa qoyskeyga sanado badan baana ka haray qandaraaskeeyga. ‘
Laacibkan ayaan marna qiimeeyn buuxda ka helin Guardiola oo laacibiinta jireed ka door bida kuwa farsamada leh, balse laacibkan raacaha ahi wuxuu weli xiddig ka yahay Torino iyadoo ay Juve soo ceshan karto sida ay qoreeyso saxaafaddu.
Yeelkeede, Vidal ayaa u dhexeeya 3 xaaladood oo kala ah: Mustaqbalka aan kala cadeeyn ee Bayern Munich, inuu Chelsea kula biiro Conte iyo inuu ku guryo noqdo Juventus oo ay taageerayaasheedu u yaqaannaan Re Arturo ama boqorka.
Origi iyo Suarez oo hoggaaminaya kooxda usbuuca ee Europa League
HOR DHAC: Arsenal Vs. Norwich